China FOTON U12D ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
Foton 12m nso nchịkwa bụ ngosipụta kachasị mma nke ịdị mma, nchekwa, ntụkwasị obi, arụmọrụ dị elu, ịlele ahịa chọrọ site na njirimara ya na mmetụta ya dị egwu.
Transportationgbọ njem nkịtị
N'ozuzu Dimension 12000 * 2550 * 3790
Oche ụkwụ 6000
Curb arọ 13T
Ikike Oche 32 + 1 + 1/49 + 1 + 1 nke 1
Nhazi ahụ Monocoque / Ọkara-monocoque
Emission Standard EURO II - EURO V
Ulo Luagge 10 m3
Ọdịdị Kasị Elu Okpueze yiri okpueze: mara mma ma mara mma, na-egosipụta ịdị ebube ya; Igwe ikuku nke elu: na-egosipụta ogo ogo caster 50 maka nkwụsị ikuku dị ala, dị mkpa na ịchekwa ike; Mgbidi mgbidi: nhazi usoro nke nwere ike ma di nkenke.
BỌ AKWFKWỌ ARLỌ
Iwute ike mmepụta
Golden powertrain Ọ na-ejikọta na Cummins ISG engine, nnyefe ZF, SACHS ipigide na WABCO ABS na ESC (nhọrọ), na-egosipụta ọmarịcha arụmọrụ na nsị ala.
Na-eduga na fechaa na modular imewe;
Nkà na ụzụ LBSC;
2000bar teknụzụ jet dị elu;
Sụ ụzọ ụzọ ọhụrụ na ihe.
Light-ibu, aluminum ụlọ;
Obere mkpọtụ nsị site na njedebe kachasị nke helical;
Mmezi-free synchronizers n'elu zuru nnyefe ndụ;
Ndụ mmanụ jupụta.
Na-enyere aka ịgbatị ndụ ike site na 10%;
Na-ebuli njikwa nke ụgbọala na-adọkpụ n'oge usoro mberede;
Na-enyere iji zere trailer trailer na jackknifing n'oge braking;
Maximizes na arụmọrụ nke brek niile
High mgbe nile ọnụọgụ nke esemokwu;
Ezigbo ntinye aka;
Nnukwu mgbochi okpomọkụ (na-agwụ);
Low wear ọnụego & High ọsọ kwụsie ike;
Ọ dịghị deformation ọchịchọ;
Gburugburu ebe obibi dakọtara na mmepụta na
A na-etinye ígwè alloy dị elu na ike dị elu dị elu jiri 50% karịa nke ígwè nkịtị. Na ezi ala okpomọkụ weathering eguzogide ma ike Ọdịdị, ọ ana achi achi ịnya ụgbọ nchekwa.
Usdị ụdị ahụ nke Truss ụdị mecocoque na mmechi mechiri emechi, ya na ike torsional dị mma site na 50%, na-enye ndị ọkwọ ụgbọ ala na ndị njem njem ụgbọ ala na nchekwa na ịnya ụgbọ ala.
Usoro nkà na ụzụ nke oge a na-emeziwanye arụmọrụ na-egbochi nrụrụ na mma nke ụgbọ ala na-adịte aka.
Enwere oghere igwe eji eji mkpuchi ọkụ maka nyocha oge na ngwaọrụ na-agbanyụ onwe ya iji chọpụta nyocha oge; a na-eji ihe ndị na-ere ọkụ ọkụ na ihe ọkụ ọkụ na-eguzogide ọkụ A na-eji arụ ọrụ nchekwa ka mma gburugburu isi iyi ọkụ.
Busgbọ ala Foton na-aga nchọpụta ụgbọ ala siri ike na nnwale ntụgharị karịrị 100 puku kilomita na ọnọdụ nke ụdị ụzọ dị iche iche na n'okpuru ọnọdụ ihu igwe kachasị njọ dịka oke okpomọkụ, obere okpomọkụ ma ọ bụ obere nrụgide.
Foton nwere akara ọkwa nke mba dị iche iche nke digitization, ngwa nyocha ngwa ngwa, bedside bed bed, axle load, ABS test-bed, brake test nchọpụta system na ndị ọzọ, uringchekwa asambodo na nzere ntozu sitere na German TUV Rheinland na CNAS nyocha.
Site na usoro siri ike, ụgbọ ala Foton na-eguzogide ihu na ihu na ihu yana na-egbochi mbata mpụta. Tupu ha abanye na ọrụ, ha na-anwale ule na nkwenye siri ike.
UNITED EMIRATESAFGHANISTANALBANYAARMENIAANGOLAARGENTINAAUSTRIAAUSTRALIAAZERBAIJANBANGLADESHBAHRAINBELGIUMKWES .R.BHUTANBURKINA FASOBULGARIABAHREINBURUNDIBENINBRUNEI DARUSSALAMBOLIVIABrazilBOTSWANABYELORUSSIACanadaISSUE CARIBBEANCAPE VERDECENTRAL AFRICAKONGOSWITZERLANDMILAKACAMEROONCHINACOLOMBIACOSTA RICACZECH REPUBICCUBACYPRUSGAMBIAGERMANYDAMMANDENMARKDJIBOUTIDOMINICAN REPUBLICDSCHIDDAALGERIAOGBU ORIEl SALADORECUADORERITREAESTONIAEgyptSPAINETHIOPIAFINLANDFIJIFRANCEFRANYI GUYANAGUYANAGABONUNITED KINGDOMGRENADAJỌRGGHANAGUINAAGrisGUATEMALACHINA-AKỌKỌ KỌNHONDURASUGWUINDONESIAIRELANDISRAELINDIAIRAQIRANISELANDALTALIORsọ mmiri dị n'ụsọ mmiriJAMAICAJỌDANJAPANKYRGYZSTANKAMPUCHEAALAEZE NKE CAMBODIAKOREA, DEMAKWUBKWỌ ND K KOREACOTE O’IVOIREKENYAKUWAITKAZAKHSTANKUWAITLAOSLEBANONOnye dị nsọ LUEIALIECHTENSTEINSRI LANKALIBBIAR.LITUANYILUXEMBOURGLATVIALESPTHOLIBANMOROCCOMONACOMOLDOVA, REPUBLIC NKEMADAGASCARMALIBURMA (MYANMAR)MONGOLIACHINA-MACAUUMUAKAMALTAMAURITIUSMAURITANIAMALAWIMEXICOMALAYSIAMOZAMBIQUENAMIBIANIGERNIGERIANICARAGUANDTHERNỌSSNỌWỌNEPALNEW ZEALANDOMANPANAMAPERUPAPUA ỌH NEWR GU GUINAFILIPINAPAKISTANPOLANDPORTUGALPARAGUAYKATARRIYADHRomaniaRWANDAỌchịchị RussiaSAUDI ARABIASEYCHELLESSIERRA LEONESỌMỌNT IS SỌMỌNỌSouth SUDANSUDANSWEDENSINGAPORESLOVENIASLOVAKIASAN MARINOSENEGALSOMALIASURINAMESIRIASWAZILANDAKW .KWỌTOGOTHAILANDTAJIKISTANTURKMENISTANTUNISIATORO TOROCHINA-TAIWANTANZANIAUAEUKRAINEUGANDAUNITED STATESURUGUAYUZBEKISTANOZI OZIVENEZUELAVIET NAMIHE EMEREYUGOSLAVIASOUTH AFRICAZAMBIAZAIREZIMBABWE